#GuptaLeaks: 'AmaGupta' ahlela ukuthenga amaphephandaba amakhulu kuleli | News24
Ukuba nephephandaba labo kanye nesiteshi sikamabonakude kwakuseyisiqalo nje kuphela ezinhlelweni zomndeni wabakwaGupta. Imiyalezo yama-emaisl eputshukile ikhombisa ukuthi lo mndeni wawunethemba lokwakha isikhondlakhondla senkampani yezindaba lapha eNingizimu Afrika - futhi ngokwenza njalo, kunesikhathi lapho bake bacabanga ukuthenga iMail & Gaurdian, ingxenye ye-Independent Media, kanye nePrimedia. Ukhiye, ngendlela ababebona ngayo, kwakuwukuthi bahlomule kwezinye zezikhangiso ezikhokha imali enkulu zikahulumeni nabebelokhu begixabezwa ngazo ezinkampanini zabo zezindaba – ngenxa yezindaba ezeseka uhulumeni.
Imiyalezo yama-Email s ayesihloko sithi ‘Project M’, ngasekuqaleni kukaJanuwari 2016, iyona eyayisetshenziswa abakwaGupta ukuqhuba izingxoxo zokuthenga iMail & Guardian. Njengoba kubike iThe Times ngoMsombuluko, amaGupta ayehlose ukuthenga leli phephandaba ukuze ashintshe indlela elibika ngayo, bese litusa kakhulu uhulumeni, uZuma, amaGupta, bese ngalokho ligixabezwa ngenqwaba yezinkontileka zezikhangiso zikahulumeni.
Kodwa-ke iMail & Guardian akusiyo kuphela inkampani yabezindaba abakwaGupta ababeyigaqele.
Kwaba iPrimedia – inkampani ephethe imisakazo okubalwa kuyo i-702 kanye neCape Talk; i-Eyewitness News (i-website yezindaba); kanye neSter-Kinekor (inkampani yama-cinema) – nokuyiyona (iPrimedia) abakwaGupta abayichaza “njengobucwebe emklomelweni”.
OLUNYE UDABA: AbakwaGupta kubathathe izinyanga ukukhokhela izindleko zomshado 'wezimanga'
Emyalezweni owathunyelelwa uTony Gupta ngomhlaka-3 kuDisemba 2014, uVim Rajbansi, we-Oakbay, wamemezela ukuthi “Siyayifunda iPrimedia… sesiqalile ukubaletha etafuleni ukuze kuxoxwe. Sesenze ukuhlolwa kwezimali okusezingeni eliphezulu enkampanini.”
Kodwa-ke iCEO yePrimedia, uRoger Jardine, uphike wama ngentaba ukuthi bake baba nezingxoxo namaGupta ukuze kudayiswe iPrimedia.
Kodwa-ke abakwaGupta abazange baliphonse ithawula njengoba babe sebeqhubekela phambili nemizabo yokuthenga i-Independent Media, nokuyinkampani eshicilela amaphephandaba angu-18 eNingizimu Afrika.
Ngaphambilini ngezikhathi ezimnandi, abakwaGupta babenobudlelwano obuhle no-Iqbal Surve, uSihlalo wenkampani ephethe i-Independent Media, iSekunjalo.
Kodwa-ke izinto zaqala ukuba muncu ngemuva kokuthi uSurve aqala izingxoxo zokuthenga i-Independent Media ngo-2012. Njengoba amaBhungane ake abika ngaphambilini, uSurve waphakamisa ukunikeza amaGupta ingxenye ethile yenkampani (amasheya) enombandela engxenyeni yakhe eyayingu-27.5% we-Independent Media – nokwakuzoba yingxenye enkulu okunengxenye kaSurve.
Kulokhu, amaGupta wona ayezoba esethola ilungelo lokuqoka abahleli (editors) bamaphephandaba okubalwa kuwo iCape Times kanye neThe Star. Lokhu kuqinisekiswe yimibiko eputshukile yama-emails. AmaGupta ake azama ukuzithengela i-Independent Media ngokwawo kodwa achithwa.